Dubai City Company manampy mpivarotra mitady asa any Dubai
Dubai City Company manampy mpivarotra
Ny manam-pahaizana ekipa dia manome anao vaovao amin'ny fizotry ny asa fitadiavana asa. Ny tsara indrindra ho an'ny mpiasa vahiny. Raha ny tena izy, ny orinasa Dubai City dia nanampy ireo mpiasa vahiny vahiny. Aleo hitodika any amin'ireo orinasa roa tonta any Moyen-Orient.
Ny manampahaizana manokana momba ny fandraisana mpiasa an-tserasera amin'ny mpampiasa any Emirà Arabo Mitambatra. Ohatra tsara amin'ny sampan-draharaha matihanina. Manana fanamafisana iraisam-pirenena. Avy amin'ny faritra toy ny. Qatar, Arabia Saodita miaraka amin'i Koety sy Ejipta. Amin'ny toerana rehetra, ireo mpiasa vahiny dia afaka asaina.
Ny mpiasa any ivelany dia afaka mahita asa. Tokony hotsarovana fa tsy ny mpitarika iraisam-pirenena ihany no hitarika antsika. Ny orinasan-tanànan'i Dubai dia mametraka fandefasana mpiasa vahiny avy any ivelany any ivelany. Mpiasa indianina, atsimo afrikana ary manampahaizana pakistani. Etsy andaniny dia manampy antsika amin'ny fikarohana hoe iza no miditra amin'ny faritra afovoany atsinanana. Ny vokatr'izany, ny ekipanay dia mampahafantatra ny kandidà ao amin'ny Emirà Arabo Mitambatra. Mba hahazoana antoka fa nahazo asa tsara ny manampahaizana sy ny nahazoany mari-pahaizana.
Mpitarika hitady asa any Dubai
Mpikaroka karakarao mahita fampahalalana sarobidy. Ao amin'ny famintinana dia jereo eto ambany ary jereo ny lahatsoratra bilaogy. Ny Dubai City Compoany dia mampiavaka azy. Avy amin'ny faritra rehetra manerantany. Ireo mpiasa any Filipina koa dia mampiasa ny serivisinay hahomby. Miaraka amin'izany ao an-tsainy dia saika mpitantana. Azo antoka fa hitantana ny fanampiana. Ny mpampiasa sy ny mpitantana mpiasa. Manome lanja amin'ny fampiasana ny serivisinay. Eo amin'ny tanana ety ivelany dia miara-miasa amin'ny Govermant isika.
Ny orinasan-tanànan'i Dubai dia hevi-dehibe. Indrindra ho an'ny mpikaroka any ivelany.
navoakan'ny Dubai City Company at Oktobra 30, 2019
Koety - Inona no mendrika tanàn-dehibe. Koety City. Hafa ny tanàna. Avy amin'ny toerana tsara sy ratsy. Ilaina ny mandehandeha any amin'ny Shark Mall, izay ahitanao ny fomba tsy nahafahan'ireo trondro tsy nihinana tamin'ny trondro tranainy ary nankany amin'ny tsena. Trondro, tsindrona, foza, antsantsa zaza. Hizaha tany. Koety City - ilay tilikambo telo malaza izay manana baolina namboarina. Ny iray dia tilikambo rano, ny iray dia fisakafoanana mihodinkodina (potika tanteraka mandritra ny fotoana nisian'ny Saddam - ao anatiny misy sary maneho ny fahirano an'i Kuwait), ny fahatelo dia tilikambo misy jiro, jiro ny roa hafa. Ilaina ny mandeha any na ny andro na ny alina, na mankasitraka ilay tanàna manazava. Lapan'ny Emir (na taloha na vaovao). Ireo manda dia harovan'ny tafondro maro. Ny mariky ny Emir [...]
Ahoana ny manofa fiara any ivelany (sy ny maro hafa). Torolàlana ho an'ny Expats. Ahoana ny manofa fiara any ivelany (sy ny maro hafa). Torolàlana ho an'ny Expats. Ny ankabeazan'ity karazana torolàlana ity dia manomboka amin'ny teboka bala izay mandeha toy izao: ny fanofa fiara amin'ny vakansy dia manome fahafahanao betsaka, satria mifindra finday isika ary afaka mitondra izay tadiavintsika, avo lenta ny famonjena. Ity lahatsoratra manaraka ity dia ho lava lava, avelao avelao handeha amin'ireto zavatra nentin-drazana ireto aho. Koa satria mamaky ireo teny ireo ianao dia mety ho fantatrao fa tsara ny manofa fiara any ivelany ary mitady toro-hevitra vitsivitsy ihany ianao izay hanampy anao hamakivaky ilay fizotrany rehetra. Noho izany, Andriamatoa Nofy, amin'ny maha lehilahy izay manofa fiara any ivelany matetika, dia hizara izany aho [...]
Inona no vola tokony ho raisiko any Kuwait? Koety, tsy misy antony antsoina hoe harena harena an-dranomasina Persona, dia firenena kely any atsimo andrefan'i Azia, ao amin'ny morontsiraka avaratra andrefan'ny Golfa teo aloha. Mahafaly ireo mpizahatany ny mpizahatany miaraka amin'ny indostrian'ny haitaitra ara-teknolojia haingana, izay nahafahan'ny fivoaran'ny morontsiraka amin'ny faran'ny taonjato farany. Miaraka amin'ny seranana mahafinaritra ana yacht, promenade mahafinaritra, na toeram-pivoriana manokan-tena izay hahitan'ny tsirairay zavatra ho azy ireo - avy amin'ny lovam-pisakafoanana Koetiana ho an'ireo zaridaina fialamboly. Ny fitsangatsanganana any Kuwait dia tena azo antoka. Alohan'ny handehananay anefa, ny tsirairay avy amintsika dia tokony hahaliana ny lohahevitra toy ny vola any Koety ary azontsika antoka tsara hoe inona ny vola horaisina any Koety? Inona no vola tokony ho raisiko any Kuwait? Inona ny vola ao Kuwait? Ny ankehitriny [...]
14 zava-misy hafahafa sy mahaliana avy amin'izao tontolo izao
Manasa anao izahay hitsangatsangana fohy mankany amin'ireo faritra mahaliana indrindra eto amin'izao tontolo izao. Jereo hoe aiza ny misy ny tetezana lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao, iza no firenena manana piramida be dia be, mandra-pahoviana no sidina faran'ny fe-potoana fohy indrindra. 1. Manana piramida betsaka kokoa i Sudan noho i Egypt Sudan manana piramida betsaka noho ny firenena hafa eto ambonin'ny tany - eny fa mihoatra noho i Egypt aza. Misy ny piramida 223 any Sudan any amin'ireo tanàna Sodaney ao Al Kurru, Nuri, Gebel Barkal ary Meroe. Amin'ny ankapobeny dia piramida 20-30 metatra avo miaraka amin'ny ilany mideza. 2. Firenena misy fifamoivoizana havia Na any amin'ny ankamaroan'ny firenena dia misy fifamoivoizana tanana, any amin'ny firenena 50 dia mifanohitra avokoa ny fifamoivoizana. Anisan'izany ny Angletera sy ny firenena izay nananan'ny zanatany anglisy toa an'i Australia, New Zealand, India afa-tsy ny [...]
Fomba ahazoana e-visa mankany Oman - fialan-tsasatra any Oman
Fomba ahazoana e-visa mankany Oman - fialan-tsasatra any Oman Raha mikasa ny fialan-tsasatra any Oman ianao, tadidio fa aorian'ny volana martsa 21, 2018, nisy fitsipika vaovao nampidirina tao Oman tamin'ny famoahana visa ho an'ireo olona tonga amin'ity firenena mahafinaritra ity. Mandra-pahatongan'izany, ny visa fohy ho an'i Oman dia azo alaina amin'ny sisin-tany, na amin'ny seranam-piaramanidina sy ny an-tanety. Naharitra vetivety izany ary tsy nahitana olana na nisy filaharana (farafaharatsiny tamin'ny tany miampita amin'ny Emirates), dia niharatsy kokoa tao amin'ny seranam-piaramanidina tao renivohitra. Noho izany isa izany dia maro no nanapa-kevitra ny hanao fitsangatsanganana an-tsitrapo 1-2 indray andro any Oman mandritra ny fijanonany ao amin'ny Emirates. Avy amin'ny 21 / 03 / 2018 dia afaka adinonao ny fitsangatsanganana an-tsitrapo mankany amin'ny Sultan of Oman, ary koa momba ny visa navoaka teo amin'ny sisin-tany. [...]
Koety - firenena Moske 1000!
Koety - firenena Moske 1000! Koety (APR) Hevitra an-tsitrapo mandritra ny faran'ny herinandro, fitsangatsanganana an-dalambe any Kuwait, noho ny fampiroboroboana ny tsipika Pegasus. Sidina avy any Bergamo mankany Kuwait City no vidin'ny 700 zlotys. Ny zoma izao no nanomboka ny dia tamin'ny maraina, ny maraina tamin'ny sidina 8 nankany Bergamo. Hitsipaka ny olana momba ny fandehanana manodidina an'i Bergamo aho, satria io fampahalalana io dia tsy sarotra amin'ny fitadiavana kaonty samihafa. Avy eo amin'ny sidina 14 mankany Istanbul. Eo amin'ny sambo Pegasus ny vola rehetra, lafo ny vidiny - divay 4 Euro, sandwich - 4 ary 5 Euro. Nidina ora 7 ora tany Istanbul. Nanapa-kevitra aho fa hijanona ao amin'ny distrikan'i Kadikoy any amin'ny faritra atsinanana ihany aho. Raha manana manova ny sabiha Gokcen ianao ary tsy ampy ny fotoana hitsidihana ny faritra andrefana mahaliana kokoa [...]
Qatar - firenena manankarena, orinasa manerantany, menaka, skyscrapers, lohahevitra amin'ny fianakavian'ny mpanjaka, izany hoe Qatarists, tsy mandoa hetra. Firenena iray manana faritra kely kokoa noho i Sydney no manana zo handamina ny Tompondaka eran-tany - tsy maninona izy ireo fa tsy liana amin'ny lalao baolina kitra, fa amin'ny maha firenena Islamika azy dia tsy afaka misotro toaka ianao, fa amin'ny volana mafana dia amboarina izany. tsy azo atao ny milalao baolina - mahaliana fa tsy tokony hataon'izy ireo, olana ho an'ny mpitia baolina kitra ny alikaola, apetraka ao amin'ny kianja ny acclimatization - zava-dehibe ny hananana vola.Mba amiko, Qatar, na mihoatra ny Doha renivohitra dia i Doha. tsy manana fanahy. Tsy afaka mividy fomba ianao. Miampy ny fiarovana satria mety ho iray amin'ireo toerana milamina indrindra eto an-tany izy io. fitsangatsanganana - voafetra ny tenako [...]
Tianao ve ilay izy?2
Israely sy Palestina amin'ny 2020
Isiraelita sy Palestiniana ao amin'ny Tany Masina 2020 - tanjon'ny fivahinianana mpivahiny telo lehibe. Ny Kristianisma, ny jodaisma sy ny silamo no niforona teto. Raha misy olona liana amin'ny tantara, ny fivavahana na ny fifandirana ara-politika sy ara-tsosialy ankehitriny, tsy hiala izy eo amin'ny Israel. Efa tao anatin'ny lisitry ny "tsy maintsy mahita" aho, ary nahita fotoana farany teo. Nentiko niaraka tamiko ny reniko mba hahafahany hahatontosa ny iray amin'ireo nofinofiny. Noraisiko i Jerosalema ho toy ny fototry, izay nandehanay nandritra ny alina tao amin'ny couchsurfer (fandraisana an-tserasera ny fitsidihan'ny mpivahiny), noho ny nanaovantsika resaka hariva mahaliana niaraka tamin'ny vehivavy iray teo an-toerana. Ho takalon'ny vaovao mahaliana voalohany, dia nahandro sakafo hariva izahay. Fitsangatsanganana an-Israely - toerana mahatalanjona i Jerosalema, fifangaroan-doko, vanim-potoana, mponina, maze amin'ny arabe ary mozikan'ny [...]